Jubaland oo faahfaahisay shuruuda ay ku xirtay la kulanka madaxweyne Farmaajo iyo Axmed Madoobe | XORRIYA NEWS
Home Siyaasadda Jubaland oo faahfaahisay shuruuda ay ku xirtay la kulanka madaxweyne Farmaajo iyo...
Jubaland oo faahfaahisay shuruuda ay ku xirtay la kulanka madaxweyne Farmaajo iyo Axmed Madoobe
Agaasimaha warfaafinta maamulka Jubbaland Maxamed Axmed Sebriye Bassaam, ayaa soo bandhigay qoraal uu kaga hadlaayo caqabadaha hortaagan kulanka Muqdisho uga furmi lahaa, Madaxweyne Farmaajo iyo madaxweynayaasha Maamulada Jubbaland iyo Puntland.
Agaasimaha ayaa qoraalkiisa ku bayaaniyay inay sax aheyn su’aasha ay dad badani qabaan ee ah “Doorashaaba laga garramayee Gedo maxaa keenay?”
“Su’aasha ah maxaa waqtigaan gobolka Gedo miiska loo soo saaray? Waxay daba socotaa heshiiskii Dhuusamareeb-2 ee gogol xaarka u ahaa in doorasho loo dhanyahay ay dalka ka qabsoonto” ayu qoraalkiisa ku yiri Agaasimaha warfaafinta Jubbaland.
Sidoo kale waxa uu sheegay in Jubbaland ay ka koobantahay seddax gobol, kuwaas oo ka talinta masiirkooda ay dusha ka saarantahay madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe.
Waxa uu ku sii daray qoraalkiisa in xal laga gaaro gobalka Gado, “ciidamada dowladda federaalkana laga saaro, si looga heshiiyo nooca doorasho ee dalka ka dhici karta.”
“Heshiis doorasho ee uu la geli karo dowladda federaalka waxa uu imaan karaa markii gobolka Gedo gacanta Jubbaland lagu soo celiyo, isla markaana nooca farsamo, amni, iyo goobaha doorashadu ka dhaceyso ee gobolkaas ay Jubbaland mas’uuliyadeeda yeelato” ayuu qoraalkiisa ku soo gaba-gabeeyay Agaasimaha warfaafinta Jubbaland Maxamed Axmed Sebriye.